एउटै स्वाबबाट पहिले ‘नेगेटिभ’, एक दिनपछि ‘पोजेटिभ’: वडाध्यक्षकाे यस्तो बिजोग! – PathivaraOnline
Home > समाचार > एउटै स्वाबबाट पहिले ‘नेगेटिभ’, एक दिनपछि ‘पोजेटिभ’: वडाध्यक्षकाे यस्तो बिजोग!
admin September 2, 2020 September 2, 2020 समाचार, स्वास्थ्य	0
काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिकाका एकजना वडा अध्यक्षको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पहिले नेगेटिभ आयो । कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनी मंगलबार वडा नम्बर–६ स्थित फिट वेल गार्मेन्टमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भए । तर, कार्यक्रम सकेर घर पुग्नासाथ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट फोन आयो, ‘तपाईंको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ छ !’
एउटै स्वावबाट दुई दिनको अन्तरमा नेगेटिभ र पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतले आश्चार्य मन्दै भने–‘स्वास्थ्यले लापरवाही गरेको छ, वडाअध्यक्ष ज्यूको फेरि पीसीआर परिक्षण गराउँछौँ ।’
रक्तदान कार्यक्रममा संक्रमित वडा अध्यक्षसँगै रहेका नगर प्रमुख बस्नेत आफूले पनि सानेपास्थित स्टार अस्पतालको ल्यावलमा पीसीआर परीक्षण गर्न लागेको रातोपाटीलाई बताएका छन् ।
नगरपालिकामा स्वाव संकलन गर्न गएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले वडा अध्यक्ष र नगर प्रमुखको पनि स्वाव संकलन गरेर जनस्वास्थ्य प्रगोशालामा पठाएको थियो । रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ढुक्क बनेका मेयर बस्नेत वडाअध्यको मोटरसाईकलमा हिँडेका थिए । नागार्जुन नगरपालिकामा अन्य ४ जनाको रिपोर्ट त्यस्तै गोलमाल आएको छ । पहिले नेगेटिभ अनि फेरि पोजेटिभ ।
स्टार अस्पतालको ल्याबमा पनि संक्रमित वडा अध्यक्षको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएमा रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परीक्षण गरिने मेयर बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘पुनः परीक्षण गर्दा पनि पोजेटिभ रिपोर्ट आयो भने रक्तदानमा सहभागी सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परिक्षण गर्ने दायित्व नगरपालिकाको हो, म त्यो गर्छु ।’
सुर्खेतका झपेन्द्रले गरे किन गरे यस्तो ह’त्या?
परपुरुष संग लागेको भन्दै श्रीमतीको निर्मम हत्या ,छोरी निशा भन्छिन,आमाले हात जोडेपनि बुबाले हानिरहे